Diane Down: သူမရဲ့သုံးကလေးများ Shot အဘယ်သူသည်အဆိုပါမိခင်
Diane Down ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
သူမရဲ့သုံးကလေးများ Shot ဘယ်သူမိခင်များနေ့
Diane Down (အဲလစ်ဇဘက် Diane Frederickson Down) အတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦးပြစ်မှုထင်ရှားလူသတ်ဖြစ်ပါတယ် သူမ၏ကလေးသုံးယောက်ရိုက်ကူး ။
Diane Down Phoenix မြို့, အရီဇိုးနားအတွက်သြဂုတ်လ 7, 1955 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်သားသမီးလေးယောက်၏အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ Diane န်းကျင် 11 နှစ်အရွယ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes အမေရိကန်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့တည်ငြိမ်အလုပ်ရခဲ့တယ်သည်အထိသူမ၏မိဘများမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ Wes နှင့် Willadene ကွဲပြားခြားနားသောမြို့များမှမိသားစုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Fredericksons ခဲ့ ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးများ နှင့်အသက် 14 တိုင်အောင်, Diane သူမ၏မိဘ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပုံရသည်။
သူမ၏ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ပေါင်းသို့ထည့်သွင်းခြင်းတစ်ဦးထက်ပိုခိုင်မာသောစိတ်သဘော Diane သူမကကျောင်းမှာလူအစုအဝေး "၌" သို့ fit မှရုန်းကန်အဖြစ်ရာအများကြီးသူမ၏မိဘများ၏ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်မယ့်အဓိပ်ပာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အသက် 14 နှစ်မှာ, Diane သူမ၏အလယ်နာမည် Diane အဘို့, သူမ၏တရားဝင်အမည်, အဲလစ်ဇဘက်ကျဆင်းသွားသည်။ သူမသည်တစ်ဦးခေတ်မှီ, တိုတောင်း, အရောင်ချွတ်ထားတဲ့ဆံပင်ရွှေရောင်စတိုင်အစားဝင်ရောက်ခြင်းသူမ၏ကလေးဆန်သောဆံပင်ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ သူမသည်ပိုပြီးစတိုင်ကြီးနှင့်သူမ၏ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းပုံကိုချွတ်ပြအဝတ်အစားဝတ်ဆင်လာခဲ့သည်။ သူမလည်းစတီဗင် Down, လမ်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးက 16 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏မိဘများစတီဗင်၏ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတည်ပြုမပြုခဲ့ပေမယ့်ဒိုင်ယန်းယိမ်းအနည်းငယ်သာလုပ်ခဲ့တယ်နှင့်အချိန်အားဖြင့်သူမကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့ပြီး 16 ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ရှည်လျားဝေးလံသောဆက်ဆံရေးမျိုးဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့သလိုပဲနှင့်နိုဝင်ဘာလ 1973 ခုနှစ်တွင်ယခုအိမ်ပြန်ရေတပ်အနေဖြင့်စတီဗင်နှင့်အတူနှစ်ခုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာက start ကနေထောင်လွှားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငွေပြဿနာတွေနဲ့စွပ်စွဲအကြောင်းကို Fighting ဖောက်ပြန် မကြာခဏသူမ၏မိဘများ '' အိမ်သို့သွားကြဖို့စတီဗင်ထွက်ခွာ Diane ၏ spurts ခဲ့သည်။
1974 ခုနှစ်တွင်သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးမှာပြဿနာတွေကိုနေသော်လည်း, Down သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကလေး Christie ကရှိခဲ့ပါတယ်။
ခြောက်လကြာပြီးနောက်ဒိုင်ယန်းရေတပ်ပူးပေါင်းဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းထန်အရည်ကြည်ဖုများအခြေခံသင်တန်းသုံးပတ်အကြာတွင်နေအိမ်ပြန်သွားကြ၏။ Diane အကြာတွင်စတီဗင် Christie ကလျစ်လျူရှုထားခဲ့ပါသည်ကြောင့်ရေတပ်ထဲကရတဲ့အတှကျသူမ၏အစစ်အမှန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ကလေးတစ်ဦးရှိခြင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးကိုကူညီဟန်, ဒါပေမယ့်ဒိုင်ယန်းသူတို့ရဲ့ဒုတိယကလေးကိုယ်ဝန်ဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် 1975 ခုနှစ်တွင်မ Cheryl လင်းမွေးဖွားခဲ့သည်။
ကလေးနှစ်ယောက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစတီဗင်အတွက်လုံလောက်သောခဲ့သူတစ်ဦး vasectomy ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်နောက်တဖန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ထံမှ Diane ကိုရပ်တန့်မပေးခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်သူမအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ သူမသည်ဖျက်သိမ်းကလေးက Carrie အမည်ရှိ။
1978 ခုနှစ်တွင် Down သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကိုမိုဘိုင်းအိမ်ပြန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်အကိုင်များကိုတွေ့ဘယ်မှာ Mesa, အရီဇိုးနားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာ Diane သူမ၏အထီးလုပ်ဖော်အချို့နှင့်အတူရေးရာရှိခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးသူမကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 1979 ခုနှစ်တွင်စတီဖင်ဒံယလေက "ဒန်နီ" Down မွေးဖွားစတီဗင်သူသည်မိမိအဘကိုမသိခဲ့တာကသော်လည်းထိုသူငယ်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးစတီဗင်နှင့်ဒိုင်ယန်းကွာရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ 1980 ခုနှစ်သည်အထိအကြောင်းကိုတစ်နှစ်ပိုပြီးကြာခဲ့သည်။
Diane လက်ထပ်ယောက်ျားနှင့်စတီဗင်နှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ကြိုးစားနေအချိန်များတွင်ရေးရာရှိခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောယောက်ျားနှင့်အတူထွက်ရွေ့လျားလာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်နေခဲ့ရသည်။
သူ့ကိုယ်သူကိုထောကျပံ့ကူညီပေးဖို့သူမတစ်ဦးအငှားမိခင်ဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ပေမယ့်လျှောက်ထားသူများအတွက်လိုအပ်သောနှစ်ခုစိတ်ရောဂါစာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာဒိုင်ယန်းအလွန်အသိဉာဏ်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ psychotic - သူမကရယ်စရာတွေ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေများဝါကွှားမယ်လို့တစ်တကယ်တော့။
1981 ခုနှစ်တွင်ဒိုင်ယန်းအမေရိကန်စာတိုက်များအတွက်စာတိုက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်အချိန်ပြည့်အလုပ်ရခဲ့တယ်။ အဆိုပါကလေးများမကြာခဏ Diane ရဲ့မိဘများ, စတီဗင်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ဒန်နီရဲ့အဖေနှင့်အတူနေ၏။ အမြိုးသားအ Diane နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသည့်အခါအိမ်နီးချင်းများကသူတို့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထုတ်ဖော်ပြောဆို။ အဆိုပါကလေးများမကြာခဏစားစရာဘို့တောင်းဆိုနေတာ, ညံ့ဖျင်းရာသီဥတုအဘို့ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်အချိန်များတွင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မြင်ကြခဲ့ကြသည်။ ဒိုင်ယန်းတစ်ဦးစောင့်ကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ အကယ်. သူမဆဲသားသမီးများ၏တာဝန်ခံခြောက်နှစ်အရွယ် Christie ကထွက်ခွာ, အလုပ်သို့သွားပါလိမ့်မယ်။
1981 ခုနှစ်၏အဆုံးစွန်သောစိတျအပိုငျးမှာတော့ဒိုင်ယန်းနောက်ဆုံးတော့သူမအောင်မြင်စွာအသုံးအနှုန်းမှကလေးတစ်ဦးတင်ဆောင်လာသောပြီးနောက် $ 10000 ပေးဆောင်ခဲ့သည့်တစ်ဦးအငှားအစီအစဉ်ကိုသို့လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်။
ဒါဟာ Diane လုပ်ဖော်ရောဘတ် "နစ်" Knickerbocker, သူမ၏အိပ်မက်၏လူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအားလုံးစားသုံးခဲ့ Diane Knickerbocker သူ့ဇနီးစွန့်ခွာချင်တယ်။ သူမ၏တောင်းဆိုချက်များကိုအားဖြင့်ကျဉ်းကျပ်နှင့်နေဆဲသူ့ဇနီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ Feeling, Nick ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ပျက်စီး, Diane ပြန်အော်ရီဂွန်မှပြောင်းရွေ့ပေမယ့်အပြည့်အဝနစ်ခ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုကျော်ခဲ့တာကိုလက်ခံမပေးခဲ့သည်။ သူမသည်သူ့ကိုရေးဆက်လက်နစ်ခ်လုံးဝဆက်ဆံရေးကျော်ခဲ့သူသူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းအဖို့ "တဲ့ဖေဖေဖြစ်ခြင်း" ၌အဘယ်သူမျှမစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ကြောင်းသူမ၏ပြောနေ, သူမ၏ပယ်ချခဲ့သည့်အချိန်တွင်ဧပြီ 1983 ခုနှစ်ကတဦးတည်းနောက်ဆုံးအလည်အပတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
မေလ 19, 1983 တွင်, ပတ်ပတ်လည်ကို 10 pm မှာ, Diane Springfield, အော်ရီဂွန်မြို့အနီးတိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းဘက်မှာကျော်ဆွဲထုတ်နှင့်သူမ၏ကလေးသုံးယောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်။ သူမသည်ထို့နောက်လက်မောင်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပစ်သတ်နှင့် McKenzie-Willamette ဆေးရုံကြီးမှဖြည်းဖြည်းမောင်း။ အဆိုပါဆေးရုံဝန်ထမ်းများ Cheryl သေဒန်နီနှင့်ခရစ်အနိုင်နိုင်အသက်ရှင်လျက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Diane ဆရာဝန်များကပြောကြားခဲ့သည်နှင့်အမြိုးသားတို့လမ်းမပေါ်တွင်သူမ၏ချအလံသူတစ်ဦး Bushi-ဆံပင်သောသူအားဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရဲထို့နောက်သူမ၏ကားကိုအပိုင်စီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူမကငြင်းဆန်ခဲ့သည်သောအခါ, သူသည်ထိုမိန်းမကိုကလေးများရိုက်ကူးစတင်ခဲ့သည်။
detect Diane ရဲ့ပုံပြင်သံသယဖြစ်ဖွယ်တွေ့ရှိပြီးသူမ၏တုန့်ပြန် ရဲကိုမေးခွန်းထုတ် နှင့်မသင့်လျော်ခြင်းနှင့်ထူးဆန်းသူမ၏သားသမီးနှစ်ဦး၏အခြေအနေကြားနာရန်။ သူမသည်တစ်ဦးကျည်ဆံဒန်နီရဲ့ကျောရိုးနှင့်မသူ၏စိတ်နှလုံးထိမှန်ခဲ့ကြောင်းအံ့အားသင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆို။ သူမသည်အစားအမြိုးသားအရဲ့အဖေအသိပေးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းခြင်းထက် Knickerbocker နှင့်အတူထိတွေ့ရတဲ့အကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်ပုံရတယ်။
ထိုအ Diane ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်ခံစားခဲ့ရဖူးသူတစ်ဦးအဘို့, လွန်း, အများကြီးပြောခဲ့တယ်။
ကြောင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ညဥ့်၏ဖြစ်ရပ်များ၏ Diane ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအောကျထကိုင်ရန်ပျက်ကွက် မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ။ ကားထဲတွင်ထိုအသွေး splatters ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင့်တွေ့ပါပြီသငျ့သညျရှိရာယမ်းမှုန်ကျန်ကြွင်းမတွေ့ရှိခဲ့ရာသူမ၏ဗားရှင်းမကိုက်ညီခဲ့ပါဘူး။
ဒိုင်ယန်းရဲ့လက်မောင်းကျိုးပဲ့ပစ်သတ်သည့်အခါဖြစ်သော်လည်းသူမ၏သားသမီးများ၏ကြောင်းနှိုင်းယှဉ်အပေါ်ယံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစသူမရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာအသုံးပြုတဲ့အမျိုးအစားတူခဲ့သည့် .22 caliber သေနတ်, ပိုင်ဆိုင်မှဝန်ခံရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ရဲရှာဖွေရေးစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ Diane ရဲ့ဒိုင်ယာရီသူမကသူမ၏ကလေးများရိုက်ကူးဘို့ရှိသည်မယ်လို့အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ကအတူတူ piece ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမ၏ဒိုင်ယာရီမှာတော့သူမရဲ့အသက်တာ၏မေတ္တာ, ရောဘတ် Knickerbocker အကြောင်းကို obsessive ရေးသားခဲ့သည်များနှင့်အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားသူ့ကို ပတ်သက်. အစိတ်အပိုင်းများသားသမီးတွေနဲ့လိုသောမခံခဲ့ရပါဘူး။
တစ်ဦးကြံ့ Diane အမြိုးသားအပစ်သတ်ခံခဲ့ရရုံရက်ပေါင်းမတိုင်မီဝယ်ယူခဲ့သောတွေ့ရှိခဲ့လည်းရှိခဲ့သည်။ သား၏အအမည်များကိုတစ်ခုချင်းစီကသူတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုနတ်ကွန်းဖြစ်ခဲ့သည်နီးပါးလျှင်အဖြစ်ပြုလုပ်အပေါ်ရေးထိုးခဲ့သညျ။
လူသူသူမဒါဖြည်းဖြည်းမောင်းနှင်ခဲ့သည်ကြောင့်သေနတ်ပစ်၏ညဥ့်အပေါ်လမ်းမပေါ်တွင် Diane သွားခဲ့ရသည်ဟုရှေ့ဆက်လာ၏။ ဒါကသူမသည်ဆေးရုံသို့ကိုဘေး sped ဆိုပါတယ်ရသောရဲ Diane ရဲ့ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူဍိပက္ခ။
သို့သော်အများဆုံးပြောရာမှာသက်သေအထောက်အထားလကြာမှုကြောင့်သူမတိုက်ခိုက်မှုကနေခံစားခဲ့ရလေဖြတ်အားဟောပြောနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကနျြသမီး Christie က၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ Diane သူမ၏သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့အချိန်ကာလစဉ်အတွင်း Christie ကကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လက္ခဏာကိုပြသမယ်လို့နှင့်သူမ၏အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာနှုန်းကိုမြင့်တက်လိမ့်မယ်။
ရုံကြိုတင်သူမ၏ဖမ်းဆီး Diane ရန်, ဖွယ်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးသူမ၏အပေါ်ထဲမှာပိတ်ခဲ့ feeling, သူတို့ကိုသူမရဲ့မူရင်းဇာတ်လမ်းထဲကထွက်ခွာခဲ့သည်တစ်ခုခုပြောပြဖို့စုံထောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည်သေနတ်သမားသူသူမ၏နာမဖြင့်မှသူမ၏ဟုချေါသောကွောငျ့သူမသိစေခြင်းငှါတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောသူတို့အားသို့ပြောသည်။ ရဲသူမ၏ဝန်ခံချက်ဝယ်ပါကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပိုမိုလပေါင်းများစွာဓိပ်ပာကြမည်ဟုခဲ့သည်။ သူတို့ကသူမကိုယုံကြည်အစားသူမ၏ချစ်သူကိုကလေးများမလိုချင်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကထိုသို့ပြုကြသည်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ပါဘူး။
ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 1984 တွင်, အထူးကြပ်မတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ကိုးလအကြာ, Diane Down, ယခုကိုယ်ဝန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းနှင့် လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆို , ကြိုးစားခဲ့လူသတ်မှုနှင့်သူမ၏သားသမီးသုံးဦး၏ရာဇဝတ်မှုချေမှုန်းရေး။
Diane ရုံးတင်စစ်ဆေးသို့သှားကွ၏ရှေ့တော်၌ထိုလအတွင်းသူမကသတင်းထောက်များကိုအင်တာဗျူးခံရအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့။ သူမ၏ရည်မှန်းချက်အများစုဖွယ်ရှိ, သူမ၏များအတွက်ယေဘုယျအများပြည်သူရဲ့ကိုယ်ချင်းစာခိုင်ခံ့စေဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းထောက်တွေကို '' မေးခွန်းတွေရဲ့သူမ၏မသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြောင်းပြန်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်ဖို့သလိုပဲ။ အစားကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရမိခင်တစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်ထွန်း၏, သူမ, narcissistic ရှိရာသို့ သွား. နှင့်ထူးဆန်းသည်ထင်ရှား။ ,
အဆိုပါ တရားခွင် ကိုမေလ 10, 1984 ရက်တွင်စတင်, ခြောက်ပတ်ကြာကြာရှည်လိမ့်မယ်။ အစိုးရရှေ့နေ Fred သည် Hugi ရည်ရွယ်ချက်ကပြသသောပြည်နယ်၏အမှု, မှုခင်းသက်သေအထောက်အထားများ, ရဲသူနောက်ဆုံးတော့တစ်ဦးမျက်မြင်သက်သေ, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်သမီး Christie က Down မှဒိုင်ယန်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဆန့်ကျင်ရာမျက်မြင်သက်သေများထွက်ချထား သက်သေခံ ကသေနတ်သမားသူ Diane ခဲ့တာ။
ကာကွယ်ရေးခြမ်းတွင်, Diane ၏ရှေ့နေဂျင်မ် Jagger သည်သူ၏ client ကိုနစ်ခ်နှင့်အတူစွဲလမ်းခဲ့ဝန်ခံပေမယ့်သူမ၏ကရာနှင့်အဖြစ်အပျက်အပြီးမသင့်လျော်အပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်သူမ၏ဖခင်နှင့်အတူတစ် incestuous ဆကျဆံရေးနှက်နေတဲ့ကလေးဘဝမှထောက်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါဂျူရီသူမသည်ခဲ့သည်ဇွန်လ 17, 1984 ပေါ်မှာရှိသမျှစွဲချက်အပေါ် Diane Down အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရ ထောင်ဒဏ် ထောင်ထဲမှာဘဝပေါင်းငါးဆယ်နှစ်။
1986 ခုနှစ်တွင်အစိုးရရှေ့နေ Fred သည် Hugi နှင့်သူ၏ဇနီးခရစ်နှင့်ဒန်နီ Down ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ Diane သူမကအဆိုပါကလေးငယ်ကိုဒိုင်ယန်းကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းတွင်မွေးစားခြင်းနှင့်သူမ၏အသစ်သောအမည်, ရေဗက္ကာ "ကီ" Babcock ပေးထားခဲ့သည်ဇူလိုင်လ 1984 ခုနှစ်မေီအမည်ရှိသောသူ, သူမ၏စတုတ္ထမြောက်ကလေးကိုဘွားမြင်လေ၏။ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်ရေဗက္ကာ Babcock သူမက Diane နှင့်မဆက်ဆံကြောင်းသူမ၏ပူပန်ခြင်းအသက်တာနှင့်ရေတိုအချိန်ပြောသော 2011 ခုနှစ်, ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့ကအောက်တိုဘာလ 22, 2010 "ဒီ Oprah Winfrey Show ကို" ပေါ်တွင်အင်တာဗျူးနှင့် ABC ရုပ်သံရဲ့ "20/20" ခံခဲ့ရ ။ သူမသည်အကူအညီနဲ့န်းကျင်နှင့်အတူသူမ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားသည့်ပန်းသီးဝေးသစ်ပင်မှကျကြနိုငျကွောငျးဆုံးဖွတျထားပြီးကတည်းကရှိပါတယ်။
Diane Down '' အဖေကသှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျးနှင့်ဒိုင်ယန်း၏စွပ်စွဲချက်အကြာတွင်သူမ၏ဇာတ်လမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း recanted ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမ၏ဖခင်သည်ယနေ့တိုင်အောင်, သူ့သမီး၏အပြစ်ကင်းစင်အတွက်ယုံကြည်သည်။ သူဟာလုံးဝ Diane Down exonerate နှင့်အကျဉ်းထောင်ကနေသူမလွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဟုသတင်းအချက်အလက်ပူဇော်နိုင်သူမည်သူမဆိုမှ $ 100,000 ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ရာပေါ်မှာဝက်ဘ်စာမျက်နှာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဇူလိုင်လ 11, 1987 တွင်, Diane သည့်အော်ရီဂွန်အမျိုးသမီးများနေ့သွန်သင်စင်တာမှလွတ်မြောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆယ်ရက်နောက်ပိုင်းတွင်လမ်, အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအပိုဆောင်းငါးနှစ်ဝါကျကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဒိုင်ယန်း 2008 ခုနှစ်လြှို့ဝှကျစကားများအတွက်ပထမဦးဆုံးအရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြောင်းကြားနာနေစဉ်အတွင်းသူမသည်အပြစ်မဲ့ကြီးပြောဆက်ပြောသည်။ "နှစ်တွေ, ငါသည်ယောက်ျားသည်ငါနှင့်ငါ့ကလေးတွေပစ်ခတ်သောသင်နှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်ပြောနှင့်ပြီ။ ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်တော့မှပြီ။ " သို့သော်လည်းအနှစ်တလျှောက်လုံးသူမ၏ဇာတ်လမ်းလူနှစ်ယောက်မှတယောက်သောသူဖြစ်ခြင်းဟာ assailant ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ တစ်ကြိမ်မှာသူမ shooters မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ခဲ့ကြနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့မူးယစ်ဆေးဖြန့်ဖြူးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကျင့်ပျက်ခြစားရဲခဲ့ကြဟုဆိုသည်။ သူမသည်လြှို့ဝှကျစကားငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2010 ခုနှစ်တွင်သူမတစ်စက္ကန့်လြှို့ဝှကျစကားကြားနာလက်ခံရရှိပြီးပြန်သေနတ်ပစ်ဘို့တာဝန်ယူရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်နောက်တဖန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုအော်ရီဂွန်ဥပဒေအရသူမက 2020 သည်အထိနောက်တဖန်တစ်လြှို့ဝှကျစကားဘုတ်အဖွဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Diane Down လက်ရှိ Chowchilla ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအမျိုးသမီးများအဘို့အချိုင့်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးနေပုဂ္ဂိုလ်: Christina မောရစ်
Somers Thompson က၏လူသတ်မှု
အမိဝမ်းထဲ Raiders - သန္ဓေသားပြန်ပေးဆွဲမှု
Death Row အကျဉ်းသား Brenda အင်ဒရူး၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
အဆိုပါရော်ဘင် Row ဖြစ်ရပ်မှန်: မိခင်များရဲ့နောက်ဆုံးသစ္စာဖောက်ခြင်း
Update ကို: အဆိုပါ Holly Bobo ဖြစ်ရပ်မှန်
အားလုံးသည်ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Sate အကြောင်း
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်တုရုမြို့အတွက်ဘေးနံရံရှ Repair လုပ်နည်း
တစ်ဦးတပတ်ရစ်မော်တော်ကားရောင်းဝယ်ရေးမေးပါမှထိပ်တန်း 10 မေးခွန်းလွှာ
အဆိုပါ 2000 ပြည့်နှစ် 100 အကောင်းဆုံးပေါ့ပ်သီချင်းများ
စားပွဲတင်တင်းနစ်အခြေခံပညာပှေ့ - အ Forehand Counterhit
မဟာ Salt Lake နှင့်ရှေးရေကန် Bonneville
သငျသညျအဆိုပါ SAT လွတ်သွားသောလျှင်အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါရန်
ရယ်စရာအကောင်းဆုံးက iPhone Keyboard ကိုအတိုကောက်နောက်ပြောင်မှုများ
အဆိုပါ Blender များ၏သမိုင်း
Tennessee ပြည်နယ်ကယပ်လှေပြိုင်ပွဲ, နူးလှေလှော်ကစားနည်းများနှင့်အပျော်ဖောင်စီးခြင်း
Atlatl လှံပေါက် - 17,000 တစ်နှစ်တာဟောငျးအမဲလိုက်ခြင်းနည်းပညာ
သတိရအောက်မေ့သီချင်းများနှင့်အတူ 9/11 Remembering
ယေရိခေါမြို့ (ပါလက်စတိုင်း) - ရှေးဟောငျးအီစီးတီး၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Bristol က Beaufighter
လျင်မြန်စွာသင်ခန်းစာ - perl () Function တည်ရှိ
Blend 101: သူတို့ကဘာတွေလဲ?
, La Venta ၏ Olmec Capital ကို - သမိုင်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ